Marwan Barquuti ma badeli doonaa Maxamuud Cabaas? - BBC News Somali
Marwan Barquuti ma badeli doonaa Maxamuud Cabaas?
26 Maajo 2018
Marwan Barquuti waxa uu ku jiraa xasbi Israa'iil
Dad badan ayaa u loolamaya in ay badalaan hoggaamiyaha gaboowga ah ee Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas, balse hal nin ayaa la wada hadal hayaa, hase yeeshee dhibka jira waxa uu yahay in uu ku jiro xabsi Israa'iil.
Caafimaadka Maxamuud Cabaas ayaa laga deyrinayaa, waxaase lasoo saaray sawir isaga oo xiran dharka isbitaalka, dhex socdane goobtii lagu daweynayay, taas oo loo fasirtay in lagu beeniyo walwalka iyo wararka laga faafinayo caafimaadkiisa.
Tartan adag ayaa ka dhex socda xisbiga Fataax ee talada haya, balse afhayeen u hadlay ururka Xamaas oo ka taliya Qasa ayaa sheegay in doorashada hoggaamiyaha reer Falastiin aysan ahayn arrin hal xisbi oo kaliya quseysa, balse ay tahay mid dadka oo dhan ay tahay in ay ka qeyb qaataan.
Ururka Xamaas ayaa ku guuleystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka doorashooyin dhacay 2007-dii, balse dagaal ka dhex dhashay labada urur ayaa kala jabiyay dowladda, taas oo keentay in Xamaas ay maamusho Qasa, Fataxna ay maamusho marinka galbeed.
Wixii markaas ka dambeeyay ma aysan dhicin wax doorashooyin ah heer kastaba.
Gabar Falastiin u dhalatay oo loo xiray askar ay dharbaaxday
Jiritaanka Xamaas maxay kusoo kordhisay qadiyadda Falastiin?
Sanadkii hore doorashooyin dowladaha hoose ayaa ka dhacay Daanta Galbeed, balse waa laga diiday Qasa.
Marka ay timaado qofka bedalaya Maxamuud Cabaas, Xamaas ayaa la filayaa in ay soo sharaxaan Ismaaciil Xaniya oo mar soo noqday Ra'isulwasaaraha Falastiin.
Cabaas oo 83 jir, kuna sugan isbitaal
Sida uu dhigayo sharciga, haddii madaxweynaha uu dhinto ama xilka wareejiyo, waxaa badalaya afhayeenka baarlamaanka inta doorashooyin laga qabanqaabinayo.
Hadda waxaa guddoomiyaha baarlamaanka ah Casiis Daweek oo ka tirsan ururka Xamaas
Balse saraakiil badan oo Fataax ka tirsan ayaa ku doodaya in qodobkan dastuurka ku jira uusan shaqaynaynin, iyaga oo ku doodaya in baarlamaanka uusan shirin wax ka badan 10 sano.
Sanadkii hore, Maxamuud Al Caluul ayaa loo magacaabay hoggaamiye ku xigeenka Fataax, waana markii ugu horeysay oo booskaas qof buuxiyo, waxaana loo arkay in loo diyaarinayo in uu bedalo Maxamuud Cabaas.
Balse waxaa jira nin ka tirsan guddiga 18-ka ah ee Fataax, balse ku jira xabsi Israa'iil, kaas oo lagu xukumay 3 jeer oo xabsi daa'in ah.
Waa Marwaan Barquuti, kaas oo hormuud ka ahaa kacdoonkii 2000-illaa 2005-tii ee Intifaada.
Daanta Galbeed iyo Qasa intuba isku mid ayaa looga jecelyahay, isaga oo xitaa gacan ka geystay in lasoo afjaro kala qeybsanaanta Falastiiniyiinta dhexdooda ah.
"Taageerada loo hayo aad ayay u badantahay, Gasa iyo Daanta Galbeedba" ayuu yiri Khaliil Shikaki oo ah agaasimaha xarunta daraasaadka siyaasadda Falastiin, taas oo aragti uruurin joogto ah ka samaysa deegaanadan.
"Waa uu ka guuleysan karaa Cabaas iyo Xaniya intuba, xitaa hoggaamiyeyaasha kale ee Fatax" ayuu intaas raaciyay.
Marwaan Barquuti horay ayuu u sheegay in uu danaynayo in uu noqdo hoggaamiyaha Falastiin, balse maadaamaa aysan muuqanin wax saansaan ah oo ku saabsan in Israa'iil xabsiga ka siidaynayso, damaciisa siyaasadeed waa mid mugdi ku jira.
Waxaase jira saddex nin oo cadcad oo loo filan karo in ay bedalaan Maxamuud Cabaas, waxa ay kala yihiin Jibriil Rajuub, Maajid Faraj, iyo Maxamed Daxlaan. Nimankan marka la eego taageerada ay ka haystaan hay'adaha amniga, iyo lacagta ay haystaan, ayaa loogu malaynayaa in ay fursad heli karaan.
Cabaas waxa uu bedalay Yaasir Carafaat
Haddii uu meesha ka boxo Maxamuud Cabaas, waxaa laga yaabaa in dad kala duwan loo kala dhiibo xilalka uu isku hayo hadda, kuwaas oo kala ah Madaxweyne, Guddoomiyaha Fataax, iyo hoggaamiyaha jabhadda PLO.
"Magacyada aad hadda maqlaysaan waa dad horay uga tirsanaan jiray laamaha ammaanka, kuwaas oo la macaamilay Israa'iil, reer Galbeedkana ay aaminsanyihiin" ayuu yiri Nathan Thral oo ka tirsan kooxda xasaradaha adduunka ee ICG.
Dadka magacooda la xusay waxaa ka mid ah Nasser Al Kidwa oo mar noqday wasiirka arrimaha dibedda, haddana Falastiin ku matala Qaramada Midoobay. Waxa ay qaraabo dhow yihiin hoggaamiyihii dhintay ee Falastiin Yaasir Carafaat.
Dadka qaar ayaa odorasaya in hardan xagga awoodda ah uu ka dhex bilaaban doono Fataax oo ku saabsan qofkii bedeli lahaa Cabaas.
19 Jannaayo 2022
Cumar Cabdirashiid oo sharaxay sababta "Xalweyste" loogu bixiyay
Biden oo hanjabaad adag u diray Putin
Turkiga oo shaaciyay arrin aan horey looga war hayn oo ku saabsan ciidamada Soomaaliya
Ictiraaf: Maxaa la isu barbardhigayaa Somaliland iyo Bangladesh?